Hogaamiyaha Mucaaradka Kenya oo Booqanaya RiftVally – Radio Daljir
Hogaamiyaha Mucaaradka Kenya oo Booqanaya RiftVally
Nofeembar 2, 2015 3:01 b 0
Isniin, November 02, 2015 (Daljir) —Hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ah ee CORD Raila Odinga ayaa la filayaa in uu isbuuca fooda nagu soo haya billaabo booqasho uu ku marayo Gobolka Rift Valley, taasoo dhawaanahaanba la qorsheynayay.
Mr Odinga ayaa lagu wadaa in uu gaaro Countiga Kericho isagoo damacsan inuu halkaas uga jawaabo isu soo baxyada ducada qaran ah ee ay siyaasiyiinta isbahaysiga talada haya ee Jubilee u sameynayaan madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto oo wajahaya kiiska maxkamadda ICC-da.
Booqashada uu Raila ku tagayo gobolkaas ayaa u ah mid faa’iido weyn ugu jirto maadaama uu haatan ka helay taageero, wixii ka dambeeyay doorashadii 2007-di oo uu ku lumiyay siyaasiyiin fara badan oo ay xulafo ahaayeen isla markaana gobolkaa skasoo jeeday.
Garabka mucaaradka ayaa sheegay in isu soo baxyada ay ku qabanayaan gobolka Rift Valley ee uu kasoo jeedo Ruto ay uga gol leeyihiin in ay ku beeniyaan sheegashooyinka ku aadan in Raila Odinga uu ku lug leeyahay abaabulka kiiska ka dhanka ah.
madaxweyne ku xigeenka ee yaalla maxkamadda caalamiga ah ee fadhigeedu yahay magaalada Hague.
Siyaasiyiin ka tirsan Jubilee ayaa hogaamiyaal uu Odinga ka mid yahay ku eedeeyay in ay masuul ka yihiin qorsheynta kiiskaas, isla markaana ay abaabuleen marqaatiyaal been abuur ah.
Arintaasi ayaa xiisad weyn ka dhex abuurtay mucaaradka iyo dowladda oo haatan u xusul duubaya in ay shacabka hantaan si ay taageero ballaaran uga helaan doorashada 2017-ka.
QM Oo Cambaareeyey Weerarkii Hotel Saxafi
Xisbiga AKP oo Guulo waa weyn ka Gaaray doorashadii Barlamaanka ee Turkiga